Vacuum The Decapsulator abuuraa jet hawada inay u beddesho 4-5bar hawada tilmaantay Tifaftirayaasha ay bixiyaan il hawada ka baxsan galay vacuum ah ee hirka sare pulsed ah. Hawada ee hirka sare pulsed joogto ah barbaro kaabsoosha qolladdii shaqeeyo muddo go'an gudahood. Sidaas darteed, kaabsoosha si tartiib tartiib ah u kala soocaan, budo ama kaabsal gudaha u dhacaan galay foosto ee. Maaddaama ay ciidamada dabacsan halkii ciidamada farsamoyaqaanka, qolofka kaabsal sii buuxda u dhawrsan; goosin ma abuuray ee geedi socodka this.
Next: Kaabsol Checkweigher CMC-1200